लक्ष्मी खडकाको पहिलो गीतले सबैलाई रुवायो, “चौका दाउ” गाएर चकित पारिन हेर्नुस बिहे कहिले गर्छिन ? – Khabar Patrika Np
लक्ष्मी खडकाको पहिलो गीतले सबैलाई रुवायो, “चौका दाउ” गाएर चकित पारिन हेर्नुस बिहे कहिले गर्छिन ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ०१, २०७७ समय: ०:४३:०४
काठमाडौँ | सामाजिक संजाल बाट धेरै राम्रा प्रतिभाहरुले स्थान पाएका छन् | कला र गला हुनेहरुलाई ठूलो मञ्च पनि आवश्यक पर्दैन । पछिल्लो समय प्रविधिको उच्चतम सदुपयोगले सिर्जनाका धनीहरुलाई रातारात ठाउँमै पुर्याएको छ । आफूसँग कला, गला हुनेहरु सामाजिक सञ्जाल र युट्युब जस्ता प्लेटफर्ममै भाइरल बन्छन् । र, उनीहरुले अवसर पाउने गरेका छन् । यी भाइरल भिडमा पछिल्लो समय अगाडि आउने नाम हो लक्ष्मी खड्का ।
धादिङ जिल्लाको बसेरी घर भई हाल पढाईको शिलशिलामा काठमाडौँ बस्दै आएकी लक्ष्मी अहिले सामाजिक संजालमा निकै नै भाइरल भएकी छिन् । टिकटकमा सक्रिय उनले धेरै लोकगीतहरु आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरी अपलोड गर्ने गर्थिन् । उनको स्वरलाई मन पराएर केही युट्युबरले अन्तर्वार्ता लिए । त्यसपछि, उनी भाइरल बन्न पुगिन् ।
युट्युबरकै माध्यमबाट उनले सर्जक भेटिन् र उनले पहिलो गीत बजारमा ल्याउन पाएकी छिन् । बिबिएस तेस्रो बर्षमा अध्ययनरत लक्ष्मी अहिले काठमाण्डौमा छिन् । सानैबाट गीत गाउने शौख भएकी लक्ष्मीको सुरिलो स्वरबाट सबैको मन पनि जित्न सफल भएको छ । हेर्नुस –